Bafike bediniwe bebhodla umlilo abazali abasola uthisha ngokusebenzisa umuthi ukuze athole isikhundla | Scrolla Izindaba
Bafike bediniwe bebhodla umlilo abazali abasola uthisha ngokusebenzisa umuthi ukuze athole isikhundla
Kuphoqeleke ukuba kubizwe amaphoyisa esikoleni sasemakhaya eNquthu enyakatho naKwazulu-Natali ngemuva kokuba kufike abazali bedinwe begane unwabu besola uthisha ngokusebenzisa umuthi ukuze athole umsebenzi kulesi sikole.
Ividiyo eqoshiwe iveza izingane eziningi esikoleni samabanga aphezulu e-Ndlelanhle zibhekene nobunzima obungaqondakali.
Izingane zizwakala kwividiyo zihayiza, kuphinde kuvele abafundi cishe ababili bequlekile bethola usizo okubonakale kwividiyo eqoshwe ngoLwesithathu oludlule noma ngoLwesine.
Lezi zingane ebezibonakala zibhekene nobunzima bokuhayiza zithi zazibona inyoka, okuholele ekutheni abafundi bakholelwe ukuthi uthisha wabo usebenzisa umuthi ukuze athole isikhundla sokuba uthishomkhulu.
Kusanda kubanjwa inhlolokhono ukuze kukhethwe uthishomkhulu ozophatha lesi sikole.
Omunye uthisha okhona ohlwini lothisha abakade bekwinhlolokhono bamsola ngokusebenzisa umuthi ukuze athole isikhundla, njengoba abazali bekholelwa ukuthi yilokho okuholele izingane zabo ukuthi zihlukumezeke futhi zigule esikoleni.
Inyanga yendawo, Induna uMaureen Ngubo, utshele i-Scrolla.Africa ukuthi kufike iqulu labazali bedinwe bebhodla umlilo njengoba kuze kwaphoqeleka ukuba babize amaphoyisa.
“Bekumele amaphoyisa angenelele ngoba abazali bebedinwe kakhulu befisa ukwazi ukuthi kungani kusaqhubeka inhlolokhono ekubeni izingane ziyahayiza zibona izinyoka esikoleni,” kusho uNgubo.
Amaphoyisa aphoqelekile ukuthi asebenzise i-teargas ukuze ahlakaze iqulu labazali, abakade benodlame bezama ukungena ngenkani esikoleni.
NgoLwesithathu, amalungu esonto, abahlengikazi bendawo babizwe emkhulekweni obubanjelwe esikoleni ukuze bakhulekele imimoya emibi okusolakala ukuthi isingene kulesi sikole.
Okhulumela umnyango wezemfundo KwaZulu-Natali, uMuzi Mahlambi uthe laba abasola othisha ngokusebenzisa umuthi ukuze athole isikhundla abalethe ubufakazi emaphoyiseni ukuze kuvulwe icala.
UMahlambi ugxeke isimo nendlela yokuziphatha kwabazali abafike begane unwabu esikoleni kwaphoqeleka ukuba kubizwe amaphoyisa.
“Okwenzeke esikoleni samabanga aphezulu eNdlelanhle akwamukelekile neze,” kusho uMahlambi.